Xog:- Yaa ka dambeeyay Rooboow inuu isku dhiibo DFS kahor intaan la xidhin?.
January 11, 2019 marqaan Somalia, Wararka Maanta 6
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay ka dambeysay qorshihii Shiikh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), afhayeenkii Hore ee Al-shabaab isugu soo dhiibay Dowladda Soomaaliya sanadkii 2017-kii aynu soo dhaafnay.
Wasiirka difaaca Dowladda ingriiska ninka lagu magacaabo Gavin Williamson oo la hadlay Wargeyska Independent ayaa sheegay in dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ay Rooboow kasoo badbaadiyeen khatartii Al Shabaab.
Waxa uu sheegay in Labadda Dowladood ay dadaal ku bixiyeen sidii Muqtaar Roobow looga soo badbaadin lahaa Al-shabaab, oo xiligaas kula dagaalamayay Tuuladda Abal Degmadda Xudur ee Gobolka bakool.
Dhanka kale Wasiirka Difaaca Ingiriiska ayaa sheegay in uu baajiyay safar uu ku imaan Magaaladda Muqdsiho, sababo la xiriira Xariga Shiikh Roobow, oo dowladda Soomaaliya kasoo xirtay bishii December Magaaladda Baydhabo,xili uu kamid ahaa Musharixiintii doorashadda Madaxweynaha Koonfur galbeed.
Gavin Williamson Wasiirka Difaaca Ingiriiska ayaa isbuucii lasoo dhaafay booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada Hargeysa ee Somali-land, halkaas oo uu kulan kula qaatay Madaxweynaha Somali-land Muuse biix.
Roobow waa in la dila oo aan Raashin iyo cunto lagu qasaarin. Dadku dilay xaqoodi yaa ka masuul ah.
AL-SHABAAB >>>>>>>>>>> Toogasho waa in DFS ay meel ugu qorta ama ha isasoo dhiibo ama ha la arko isago socda ama isago qori sita…….Full Stop !
In la xiro Rooboow waa xaq iyo sax.Waayo meeqa dad soomaali ahaa buu soo dilay?Imisa sano buu soomaali laynayey?Meeqa Wiil soomaaliyeed buu Toogtay?Meeqa hooyooyin soomaaliyeed buu ka boohiyey?Rooboow waa in lagu xukumaa Toogasho deg-deg ah.Rooboow waa dambiile dhab ah.Rooboow yaan axsaan loo galan.
gaaladu waxay rabaan inay sida ay doonaan naga yeelaan ,dorraad roobow madaxiisa waxay dul-dhigeen 20 milyan oo doolar,shalay way noo keeneen oo la heshiiya waa toobad keenaye la soo istaageen ,maanta waxay leeyihiin dawlad goboleed madaxweyne inuu ka noqdo oggolaada-isaga oo weli aan ka tanaasulin ,wixii uu ahaa ,boqlaalkii uu dilayna aan dadka soomaaliyeed ka raali gelin weli-tan ka sii daran gaalo waxay rabtaa in roobow uu lahaado ciidankiisii hore oo kan dawladda ka madax bannaan-waxaasi waa gunnimo sida ay doonaan ma noqon karto ,haddii kale maxaa loo xirxirayaa shabaabka kale,waxaa dadka soomaaliyeed isla oggolaaday (barlamaan iyo golaha wasiirada) in boroosis la mariyo qof kasta oo isa soo dhiiba ,inta boroosisku dhameystirmayo in la hayo qofka isa soo dhiibay-
gaalo waxay nasiiyaan waa hoo oo gumeysi dadban oggolow,taas waa in la diido ,xitaa haddii berri ay weerar soo yihiin-Gavin waxaa ka liita kuwa rumeystay inay wax ku noqonayaa dabo u ruxa gumeystaha,waa la iska dhicin dalkuna waa dal muhiim ah ,oo aan saaxiib waayi doonin.
War Rooboow cidina lama heshiin.Ma waxaa la heshiiyey dadkii uu xasuuqay eheladoodii masee cid kale?Rooboow,Xassan Daahir Aweeys,Muuse Suudi,Muxammad Qanyare,Cabdiqaasim Salaad,Indha Cadde,Cabdiqeybdiid,Xassan Shiikh,Moorga ama qam-qamlayaasha beesha USC dambiilayaal bay u badan yahiin.
Calaa kulli xaal Rooboow waa in la soo hortaagaa maxkamad milatri ee an naxariis lahayn.Bal yaa yaqaan sababtuu u laayey dad badan oo masaakiin ahaa?Haddii la weydiiyo bal maxuu ku jawaabi doonaa?Ma waxuu oran doonaa Diinta Islaamka bay diideen?Haddii ay xattaa diideen isagu xaq uma leh in uu dilo illaa isagu ma xukumo wadankee.Qofkastoo soomaali ah oo dambi galay waa waajib in la soo xiro haddii run la sheegayo.
War ilaahey last cabsada oops afkiina kheyr lunch she egalitarian
War ninkaan dad badan ayuu dilay mana istaagayo ileen dilka waa yaqaanaa nin naxaaya ma aha Muu Ingiriiska kaxaystomuxuu nagukla talinayaa in la soo dayoHe is very dangerous then take into yuour contry